Sochie osimiri n'akụkụ m na 25 Best Track Beach na Los Angeles
By Na -agba egwu September 23, 2021 si ebi ndụ, Travel 0 Comments
- Ụsọ mmiri dị m nso -
Ebe nkiri osimiri (ọkachasị mgbe ị zutere okporo ụzọ), bụ otu n'ime akụkụ kachasị amasị mpaghara Los Angeles.
Anyị na -edepụta ndepụta ụfọdụ ebe kacha mma iji zuru ike site na Pacific na mpaghara Los Angeles, ma ị nwere nkịta, chọrọ ikwe mịpụ, chọrọ ịkwa ụra ma ọ bụ kayak, enweghị ike zuru ezu ijide ebili mmiri na ụgbọ mmiri gị. , dị ka nnụnụ nnụnụ ma ọ bụ naanị chọrọ igwu mmiri na ihi ụra.
Ewezuga Hollywood na okporo ụzọ, ikekwe Los Angeles kacha mara amara n'echiche ndị a ma ama maka osimiri ya.
Mpaghara Los Angeles na -anya isi ụfọdụ akụkụ ọmarịcha na ama ama nke oke osimiri, site na ọdọ mmiri nke Palos Verdes Peninsula ruo aja aja nke Malibu.
Ebe nlegharị anya na ụda nke Venice Ocean Front Walk na Santa Monica Pier nwere ike ma ndị obodo ma ndị ọbịa. Ma ọ bụghị naanị ha bụ osimiri dị na Los Angeles; ha bụ naanị ndị kacha ekwo ekwo.
N'iburu nke ahụ n'uche, ebe a bụ osimiri 13 dị na mpaghara dị mma maka igwu mmiri, ịnwụ anwụ, ịgba ịnyịnya, ịgagharị, ịgagharị na ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ ime n'ụsọ osimiri.
25 Oke osimiri kacha mma na Los Angeles
N'okpuru bụ ụfọdụ osimiri dị m nso na 25 Best Track Beach na Los Angeles:
Ọ bụ ogologo njem gaa n'ụsọ osimiri a, nke dị na mpụga ókèala Ventura County, mana ụgwọ ọrụ ya bụ oke osimiri dị egwu nke nwere ụfọdụ ọdịda anyanwụ mara mma nke Southern California.
Mgbe ịgagharị na ogige steeti dị nso, ị nwere ike jụọ oyi na sọfụ.
2. Robert H. Meyer Ncheta State Beach
Nke a bụ otu n'ime osimiri ndị dị m nso.
Ụsọ osimiri El Pescador, La Piedra, na El Matador so na mpaghara ndị pere mpe nke oke osimiri dị na nnukwu osimiri steeti a.
Nke ikpeazụ a na -enye usoro okwute na ọmarịcha ọmarịcha inyocha, atọ ndị a bụkwa ebe dị mma maka igwu mmiri na igwu mmiri.
3. Paradaịs Cove
Paradaịs Cove Beach bụ obere osimiri nkeonwe nke ọha nọ n'azụ ọnụ ọnụ ugwu Malibu. Paradises Cove Beach Cafe, nke na -enye ọmarịcha ihe ọ bụla na -akwadokarị osimiri, mana ọ bụrụ na ịchọrọ igwu mmiri ma ọ bụ sọfụ, ị nwere ike ịga n'akụkụ osimiri n'efu.
Ọtụtụ ndị mmadụ na -abịa gbazite mbara ihu nkeonwe, akwa akwa osimiri, na ebe ezumike, ọ bụkwa otu n'ime ebe udo dị na Malibu ma ọ bụrụ na ị nwere ike tinye ha ego (patios nkeonwe nwere ike ịgba ihe karịrị $ 800 n'ụbọchị izu ụka kachasị ọnụ).
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọmarịcha osimiri iji nọrọ ezumike gị, gaa na Paradise Bay site na Escondido, na mgbe anyanwụ dara, ị ga -enweta iko rosé.
4. Ụsọ osimiri Venice
Bịanụ Venice Beach maka otu kilomita na ọkara ájá na-acha uhie uhie ebe ị nwere ike gbasaa blanket ma leba anya na Pacific.
Ọzọkwa, ị nwere ike nọrọ maka Venice Beach Boardwalk a hụrụ n'anya, ebe ndị na -eme ihe nkiri n'okporo ụzọ na ndị na -ere ahịa na -eme mkpọtụ ma na -ere ngwa ahịa ha, ụmụ nwoke nwere ahụ ike na -ebuli nnukwu ibu, na mpaghara ime obodo na -ezukọ.
Ọ bụ ebe na -ama jijiji maka ndị mmadụ na -achọ obere ihe n'ụbọchị ụsọ mmiri ha.
5. Osimiri Carbon (Billionaire's Beach)
Carbon Beach abụghị osimiri nkeonwe, mana ọ nwere otu. Ị ga-ahụ mmadụ ole na ole ndị ọzọ mgbe ị na-aga n'azụ nnukwu ụlọ, nke bara ọgaranya mana ọ bụghị nke a, ogologo osimiri a dị ogologo ka ọ dịpụrụ adịpụ ka Malibu na-enweta.
Mmiri ahụ dị mma maka igwu mmiri ebe ọ bụ na ọ dị jụụ yana enweghị okwute, aja dịkwa nro na mma - dị mma maka ịrahụ n'ehihie niile. Carbon Beach dị mma maka ije udo ma ọ bụ ịgba ọsọ.
Enwere obere oghere n'ime Malibu nke ndị njem na -ejabeghị, na nke a bụ otu n'ime ha, yabụ were ya mee ihe.
Enwere osimiri dịpụrụ adịpụ karịa “Escondido“? Nke a, dị ka Carbon Beach, bụ osimiri Malibu nkeonwe zoro n'azụ ụlọ ndị ọgaranya nke ndị njem na -anya ụgbọ ala n'oge gara aga na -amaghị na ọ nọ ebe ahụ.
Osimiri dị ebe a pere mpe karịa na Carbon, yabụ na ọ bụ ezi echiche ịlele ebili mmiri tupu oge eruo n'ihi na oke mmiri na -ahapụ obere mpaghara ịgbasa blanket.
Ọzọkwa, ịga ije, n'aka nke ọzọ, dị egwu, na ịgagharị site na Escondido Beach ọdịda anyanwụ ruo n'ụsọ osimiri Paradise Cove dị oke ọnụ na -amasị ndị obodo. Enweghị ebe a na -adọba ụgbọala; kama, a na -adọba ụgbọala n'ihu PCH.
Escondido Beach nwere ụzọ ịnweta ọhaneze abụọ: otu na àkwà mmiri nke gafere Escondido Creek na nke ọzọ dị nso na 27148 Pacific Coast Highway.
N'agbanyeghị na ọ nọ naanị otu awa, ọtụtụ Angelenos amaghị maka osimiri a dị jụụ, nke dị na Rancho Palos Verdes. Nke a bụ otu n'ime osimiri ndị dị m nso.
N'ọtụtụ ụzọ mkpagharị na ebe obibi nke steeti nwere ọnụ ọnụ ugwu echekwara nke na -enye echiche dị egwu banyere Pacific, Abalone Cove dị ụtọ ma ịchọrọ isonye na mmemme dị iche iche ma ọ bụ zuo ike n'elu ájá.
O nwere ụfọdụ ọdọ mmiri California kachasị ukwuu na nnukwu nnukwu ọgba iji nyocha. N'ihi okwute na -ada ada na ọnụ ọnụ ugwu na -adịghị akwụsi ike n'elu, egbochila ụfọdụ akụkụ osimiri na ọdọ mmiri, yabụ lelee maapụ iji hụ na ịnọ na nchekwa.
A machibidoro ime achịcha na ọkụ, yana anụ ụlọ.
Ihe ị ga -eme na Nashville
Ihe ị ga -eme na California
Bengal nwamba maka ire
El Pescador bụ otu n'ime akụ akụ Malibu atọ nwere Robert Meyer Memorial State Beach (abụọ ndị ọzọ bụ El Matador na La Piedra).
Nke a bụ otu n'ime osimiri ndị dị m nso. Ọ nwere ihe niile: ájá, ọdọ mmiri, ụlọ mposi, na ọbụna ihe mkpuchi nzuzo zoro ezo nke ndị ọbịa na osimiri a zoro ezo na -eleghara anya mgbe ụfọdụ.
Nke ọ bụla n'ime osimiri atọ dị na otu ahụ nwere akara nke ya, yana ebe a na-adọba ụgbọala (akwụ ụgwọ) dị na ndịda nke Leo Carillo a ma ama. Ebe ọdịda anyanwụ nke atọ bụ Ụsọ osimiri El Pescador.
Njem dị mkpụmkpụ na -agbada n'ụzọ dị warara site na ebe a na -adọba ụgbọala na 32900 Pacific Coast Highway dị mkpa iji banye n'ụsọ osimiri, nke bụ aja aja nwere ọdọ mmiri gbara gburugburu.
9. Osimiri Laguna
Wetuo windo ma mebie ụfọdụ Natasha Bedingfield ka ị na -ahapụ Hills wee gbadaa n'ụsọ oké osimiri ahụ Laguna Oké osimiri.
Obere obodo mara mma Orange Region na -anya isi kilomita asaa n'ụsọ mmiri, nwere ọgba mmiri, ọdọ mmiri, oke osimiri, na ọdọ mmiri mmiri nkịtị, n'agbanyeghị ọtụtụ oke osimiri nwere aja ma ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ịkwatu nche anwụ gị wee zuru ike maka ehihie.
Dị ka mmalite nke skimboarding, ihe dị ka ịnya ụgbọ ala nke gụnyere ịgabiga oke mmiri iji zute ebili mmiri ka ha na -abata, ọ nweghị ebe ka ukwuu ị ga -eji maa mma n'egwuregwu a jọgburu onwe ya - ma ọ bụ lelee dị ka onye na -ekiri ihe nkiri mgbe ndị obodo. gosipụta ikike ha.
Jide n'aka na ị ga -eleba anya n'iwu ugboro abụọ, ebe ọ bụ na oke osimiri nke ọ bụla nwere nhazi nke ya maka ụdị mmega ahụ. Nke a bụ otu n'ime Track Beaches Near Me.
Bow Narrows bụ ama ama dị n'akụkụ oke osimiri dị nso ebe ị ga -ahụ akàrà ka ọ na -ezumike 100 mita n'oké osimiri na Seal Rock, na skimboarding, ịwụ elu mmiri, sọfụ ahụ, igwu mmiri na mmega ahụ dị iche iche.
Thalia Road bụ nhọrọ kachasị n'etiti ndị na -ebugharị ụgbọ mmiri, ebe Wood's Bay na Darling's Inlet nwere mmiri miri emi dị mma maka ịwụ elu na nyocha ọdọ mmiri.
10. Ogige Ntụrụndụ Rincon
Kacha mara Dark's Seashore dị na La Jolla, San Diego, dị ka otu n'ime ụsọ oké osimiri California, naanị North Rincon (nke ndị obodo akpọrọ Bates Seashore) bụ ebe izu ike ọzọ ebe ị nwere ike wepu ahịrị tan gị, ma ọ bụ jiri ebili mmiri aka nri na-eme ka oke osimiri a bụrụ ebe kacha mma ịnya ụgbọ mmiri na Focal Coast.
Oke osimiri dị kilomita atọ bụ nke amachibidoro na nke siri ike n'akụkụ ụfọdụ, yabụ gafee okporo ụzọ gaa Rincon Park District Seashore ma ọ bụrụ na ị masịrị oke aja.
Obere ntakịrị n'akụkụ ụsọ mmiri bụ Carpinteria Feigns Nature Reserve ebe ị nwere ike irite ụzọ na Carpinteria Seal Safe-haven Overlook ebe ị nwere ike ịhụ akàrà na-ada n'okpuru.
Ndị na -ahụ maka ihe ọkụkụ na -agbasi mbọ ike ka ha na -agbaso akụkụ nke uwe dị n'ụsọ oké osimiri na na 2017, ọfịs ogige ntụrụndụ mpaghara na mpaghara Sheriff kwetara ịkwụsị akara mkpado ndị gba ọtọ ma ọ bụrụ na enwere mkpesa.
Ihe ịrịba ama "Enweghị Ahụhụ" fọdụrụ n'akụkụ kachasị elu nke mkpali nke na-akpali oke osimiri, mana ihe dị ka mita 1,200 n'akụkụ ọdịda anyanwụ, ị ga-achọpụta akara ọzọ na-adọ aka na ntị na ị “na-abanye mpaghara uwe nwere uche,” nke na-egosi mmalite mpaghara ha kwadoro.
Ọ bụghị mmadụ niile na -aghọta na obere mkpuchi dị jụụ n'azụ Ebe ezumike Terranea nwekwara ike ị nweta ọhaneze.
Ụsọ osimiri dị mma ma nwee ike ịnweta site na ịgagharị n'akụkụ ọnụ ọnụ ugwu, mana n'ihi na ebe a na -enye oche, mmadụ nwere ike ịbịa na -enweghị ihe ọ bụla wee nwee afọ ojuju.
Ọzọkwa, ihe kacha adọrọ mmasị bụ ọgba dị n'oké osimiri, nke ga -esiri ike iru ụmụaka, mana ịrị elu na -adọrọ mmasị n'elu nkume n'oké osimiri maka ụmụaka toro eto.
A na-adọba ụgbọala maka ọha na eze na nbinye akwụ ụgwọ nke ebinye aka na aka ekpe mbụ na Terranea Way. Ọ bụ ebe ahụ ka ọ na -agbadata Terranea Cove.
12. Oke ehi
Maka anyị bụ ndị ike gwụla ike ike, oke osimiri dị n'akụkụ ugwu Oxnard bụ echiche efu. Ọ bụ maka ihe ka ukwuu ihe dị ka igwe nju oyi 15 na ume enweghị ike ịgbagha agbagha.
Naanị mbanye otu elekere site na LA, enwere nnukwu ihe ọchị ị ga -eme na Oxnard na -aga site na mgbazinye ụgbọ mmiri ski ka ịgagharị njem site na Channel Islands - nke Oke osimiri Oxnard nye echiche eluigwe.
Na -atụle ịgbazite ụlọ n'ụsọ osimiri maka ngwụcha izu n'otu ebe? Ị ga -achọpụta ọtụtụ oke osimiri n'akụkụ oke osimiri Oxnard, agbanyeghị, Oxnard Seashore n'onwe ya nwere ike bụrụ ihe nrite.
Ebili mmiri dị ebe a na -enwu enwu, ọ na -adịkwa n'akụkụ oke nkịta nke Oxnard Seashore Park nwere nke ọma, nke pụrụ iche maka ịnya ụgbọ, ịnya ụgbọ elu, na -agbagharị na mkpọda ájá, na -elegharị anya na canines ndị ọzọ.
Nkwụsị bụ nke ukwuu na ịdị umeala n'obi, na $ 5 maka ụbọchị niile (ego). Ị nwere ike weta nkịta gị ma ọ bụrụhaala na ọ nọ n'agbụ, ebe ọ bụ na Oxnard Seashore dị na Coke Bike nke Oke Osimiri Pasifik, ọ bụ ebe dị mma iji weta ịnyịnya ígwè gị.
Achọrọ ndoputa maka mkpapụ ụyọkọ, yabụ kpọọ ha (na 805-385-7946) ka ịwepụta ntụpọ.
Otu n'ime osimiri ndị ama ama na mpaghara Greater Los Angeles bụ Santa Monica. Ogologo ogologo ya, aja aja ọcha, ntụpọ, kọwaa ya na Annenberg Community Beach House, ọ na -emekarị ihe na ndị mmadụ.
Roller coasters, Segways, pancakes, na ụlọ ezumike okomoko dị na Santa Monica Beach, nke nwekwara ụfọdụ aja kacha mma n'ụwa.
Ị naghị achọ ma ọ bụrụ na ịchọtaghị ihe ị ga -eme ebe ahụ. Nke a bụ otu n'ime osimiri ndị dị m nso.
14. Anyanwụ dara n'ụsọ osimiri - Orange County
Oké osimiri a na-adịghị ebuli elu bụ ọkacha mmasị na mpaghara, n'ihi ịnweta ya dị mfe, ebe a na-adọba ụgbọala n'okporo ámá n'efu, yana echiche kwesịrị ekwesị maka kaadị.
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere osimiri ndị dị n'akụkụ ya, ọ bụ ebe dịpụrụ adịpụ n'ihu otu agbata obi nwere oghere nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nọrọ na mmiri, na-enye ohere maka ụbọchị oke osimiri dị jụụ.
Sunset Beach na -enye ụlọ mposi na ndị nchekwa ndụ, mana ọ nweghị nri ọzọ karịa ihe ị webatara na igwe nju oyi gị. Agbanyeghị na Huntington Beach bụ obodo kacha nso, Sunset Beach bụ obodo nta ya na -edeghị akwụkwọ Orange County.
N'etiti Anderson Street na Warner Avenue, ọdịda anyanwụ nke Pacific Avenue bụ osimiri.
N'ịgbaso ogologo oge nke Dockweiler a na -emechi nnukwu ọkụ, ụfọdụ emechaala laghachi n'ụsọ osimiri ma nwee ike iji ya. Nke a bụ otu n'ime osimiri ndị dị m nso.
Nnukwu ọkụ bụ ihe iwu na -akwadoghị na Los Angeles na nnweta ha na Dockweiler bụ naanị otu ihe dị mma nke na -ekewa oke osimiri a - naanị hụ na ị ga -etinye ebe gị n'oge n'oge ka ha ga -agbacha ọsọ ọsọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nnwale, wepụta egwuregwu bar-b-que gị ma nweta anụ sitere na Belcampo ka ị na-agbago, ma dobe mmanya na-egbu egbu n'ọkụ.
Anaghị anabata mmanya na Dockweiler, ị ga -ahụkwa ndị njem ụgbọ mmiri ndị uwe ojii na -agbagharị.
Anyị enweghị ike ime ka anyị mebie ụkpụrụ ndị a, nke pụtara na anyị agaghị agba gị ume ka ị nara iko iko nri dị ọnụ ala tupu ị pụta ma bulie ya na mmiri dabara dabara na mmasị gị, na -eme ka ọ sie ike karịa maka mmejuputa iwu ọ bụla na -eme mkpagharị.
Enweghị ohere anyị ga -agba ya ume n'oge ọ bụla. Enwere obere nso na Dockweiler (belụsọ ma ọ bụrụ na ị na -achọ iri nri na Remiss), yabụ na ọ ga -abụ ụdị ụbọchị BYO Cookout.
Leo Carrillo National Park bụ ebe dị iche iche gburugburu ebe obibi nwere ọnụ ọnụ ugwu, osimiri Malibu ịga ije, na mmiri dị ọcha nwere ọtụtụ ọdọ mmiri. Nke a bụ otu n'ime osimiri ndị dị m nso.
Ọ bụ paradaịs maka ndị na -ebugharị mmiri, ndị na -egwu mmiri, ndị na -ehi ụra n'ụsọ osimiri, ndị na -ebugharị ikuku, ndị hụrụ ịkụ azụ, na ndị na -achọ ịmata mkpụrụ ndụ n'ụsọ mmiri, nke edobere na kilomita 1.5 nke ezigbo osimiri.
Maa ụlọikwuu n'akụkụ osimiri nke nnukwu osisi sịkamọ nwere ike ịbụ akụkụ bụ isi mana mmiri Leo Carrillo nwere ike ịnabata onye ọbịa ọ bụla.
Ihe kacha mma ime na Tennessee
Ihe ị ga -eme na Pigeon Forge
Ebumnuche ebumnuche Malibu, Nke Zuma ụdị ndị hụrụ Midwest mgbe ha na -atụle oke osimiri Los Angeles - ha gbara otu puku nke Baywatch ebe a.
Ikekwe Zuma bụ oke osimiri kachasị na LA niile, yabụ n'agbanyeghị ama ama ya, ị kwesịrị, n'ọnọdụ ọ bụla, nwere nhọrọ ịbanye n'ime nchọpụta nke ọma; ọ bụkwa n'otu ebe ahụ ka ị ga -achọpụta Point Dume, nnukwu echiche nke na -araba n'oké osimiri.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na -arị ugwu, bulie onwe gị elu ka ị hụ ọmarịcha ọdụm oke osimiri. Enwere nnukwu nkwụsị, agbanyeghị, n'ihi na Zuma na -ekwu maka ya nwere ike ịkarị ọnụ karịa oke osimiri dị iche iche - ọnụego oge ọkọchị nwere ike ịrị elu $ 10 maka ehihie (ọ nweghịkwa ohere ịkwụsị abalị).
Gbaa mbọ hụ na ị ga -erite uru ndị a, n'agbanyeghị na ọ bụghị ụlọ mposi dị oke egwu, ịsa ahụ na ogige volleyball.
Ọ bụ ezie na ebe nri dị n'akụkụ ma ọ bụ tụgharịa n'akụkụ oke osimiri, ụbọchị Malibu ọ bụla dị mkpa kwesịrị ịmalite (ma ọ bụ kwụsị) na mmanya Malibu - ọ bụ ọkwa kacha mma maka ị drinkụ mmanya kwa ụbọchị na Los Angeles.
Ala a na -enwu gbaa nke ukwuu, yana ndị ahịa na -agbada ọbụna karịa. Ma ọ bụ n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na-amasị gị ịtọ ụtọ mmanya na igwu mmiri n'ahịa ọhụrụ nke nwere oke osimiri dị ka ahụmịhe gị, gaa na Malibu Ranch Restaurant na Malibu Dock.
Ogige a dị obere nke nwere ájá zuru ezu iji setịpụ aka ya dị n'akụkụ ugwu Santa Monica Pier. Ọzọkwa, nke a bụ ebe mara mma igwu mmiri, pịkụl, ma ọ bụ egwu volleyball (ụgbụ a bara ụba).
Ụzọ ụgbọ ala Marvin Braude nke dị kilomita 22 na-amalite, yabụ weta ụgbọ mmiri (ma ọ bụ gbazite otu) ka ị chọpụta n'ụsọ mmiri. Nke a bụ otu n'ime Track Beaches Near Me.
Na -achọ ịpụ na igwe mmadụ? Ndị mpaghara ndịda Topaz Jetty bụ ebe ọzọ ịsa ahụ anwụ na-adị n'ụsọ osimiri ndịda ọdịda anyanwụ California.
Ihe eji enyere ndụ aka pere mpe, mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ntakịrị mkpọtụ na obere mkpọtụ, obere ije dị anya bụ ihe na -egbu maramara, Redondo Beach Pier, ebe Dennis Wilson na Mike Love kwetara na mbụ ide abụ gbasara sọọfụ.
Ọzọkwa, ụzọ ụzọ ọha na Topaz na Esplanade nwere ike ịnweta osimiri ahụ.
20. Nkịta Rosie
Rosie's Canine Oké osimiri, anyị nwere obi ụtọ ịsị, bụ kpọmkwem ihe ị na -eche na ọ ga -abụ. Kpamkpam, ị ga-ahụ ya na oghere Belmont Shore nke Long Seashore.
Egwuregwu Rosie na -eme ọmarịcha ihe nkiri canine na -atọ ụtọ, yabụ oge ọ bụla ị nwetara nnabata Facebook maka ihe dị ka "Corgi Seashore Day," nsogbu dị mma na ọ dị na Rosie. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ebe kachasị mma ị nwere ike ịta oke na mmiri mmiri mmiri.
Oge maka ụgbọ mmiri bụ elekere isii nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke abalị, yabụ, n'ezie, anaghị anabata ndị enyi gị nso n'ụsọ oké osimiri na mpụga oge ahụ.
Tụkwasị na nke a, leba anya na agbanyeghị ebe oke osimiri dị, na iburu n'uche na a na -enweta ụfọdụ akpa akpa site na arịa, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iwebata nke gị.
Long Seashore, nke bụ n'ezie mpaghara LA, nwere ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya nke pummels dị ịtụnanya n'ọfịs oriri na ọ drinkingụ drinkingụ.
Ọchịchọ ọ bụla maka nri ndị Mexico kwesịrị iduga gị na Lola: a na -akpọsa ya n'ụzọ dị ịtụnanya, mana o kwesịrị ka eburu n'uche na nri dị egwu. Nke a bụ otu n'ime Track Beaches Near Me.
21. Osimiri Hermosa
Ụda abalị na Hermosa Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe siri ike ịrị elu, ị nwere ike nweta ha site na nsọtụ ogologo ụgbọ mmiri - were onye ị hụrụ n'anya, anyị nwere ike kwuo okwu ga -arụpụta nke ọma.
Hermosa Cyclery bụ ebe dị ịtụnanya ịmalite ụbọchị gị ma ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ uche ịgbazinye ịnyịnya ígwè ole na ole wee kere na ikuku nke oke osimiri.
Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu bọọlụ volleyball ma ọ bụ tenis, Hermosa nwere ụlọ ikpe maka gị.
Gbalịa ka ị ghara ịtụ anya na Hermosa Seashore Dock ga -adị n'ụzọ ọ bụla yiri Santa Claus Monica Wharf - enweghị ịnya ụgbọ njem na ebe nlegharị anya n'akụkụ ebe a, naanị ọdụ ụgbọ mmiri nke na -eme ụfọdụ echiche pụrụ iche mgbe anyanwụ dara.
Hermosa na -enweghị anwụrụ ọkụ, nke pụtara na anabataghị ise anwụrụ na ịwụpụ (itinye obere uche n'ihe ị na -a smokingụ) na mpaghara ọhaneze ọ bụla.
Hermosa Seashore juputara na nri na ihe ọ drinksụ drinksụ nke mbụ, ọkachasị Baran's 2239 (nwalee akwa India), Barsha (jikọta mọzụlụ La Goulette na mmanya ọcha na-enye ume), na Palmilla Cocina Y Tequila (jidere jalapeño margarita kukumba ma na-ele anya ogologo oge. n'oké osimiri).
Maka ihe niile ị chọrọ maka ihe niile dị iche iche, kụrụ Abigaile: ntụpọ ahụ na-amalite dị ka ebe mgbaba nri na ebe iri nri, wee gbanwee ka ọ bụrụ onye na-agba egwu elu ụlọ dị elu. Nke a bụ otu n'ime osimiri ndị dị m nso.
Obodo Huntington City bụ osimiri a ma ama nke ogologo a, etinyere n'ime ogige 121-acre wuru na 1942 wee kpuchie elu-elu nke Orange County.
A maara ya nke ọma maka nkwụsị mmiri ya, ebe a na-ahụ maka sọfụfụ mba ụwa, yana ehihie na mgbede. Enwere ọtụtụ ụlọ ahịa sọfụ ebe ị nwere ike ịgbazite bọọdụ ma ọ bụ zụta akwa nhicha, yana ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ mmanya, ndị na -eme mmanya na mpaghara na ọmarịcha ọmarịcha nkume.
Agbanyeghị na ọ bụghị n'ụsọ osimiri, ị ga -eleghara anya ma ọ bụrụ na ịnwaleghị Normita's Surf City Taco, ọkacha mmasị mpaghara.
23. Osimiri Manhattan
Ịghara ịbụ onye a ma ama Hermosa, Manhattan Oké osimiri ga -egosipụtakwa ụfọdụ onyinyo nzuzu na nkewa abalị.
Ọ dị mfe iji mgbatị ahụ mee ihe otu ụbọchị, na Marvin Braude Bicycle Trail, Polliwog Park (ọmarịcha ebe maka golf golf), na Sand Rise Park, nke dị ka ọ dị.
Ndị mmadụ n'otu n'otu na -eji nnukwu mkpọda maka ịrụ ọrụ, agbanyeghị, ị maara oge kacha mma karịa ịrụ ọrụ (ọzọ karịa ihe niile)? Ịkwọ ụgbọ mmiri.
Site na kilomita abụọ nke oke osimiri na ihe dị ka ebe 500 na -adọba ụgbọala, nsogbu dị na ị nọ maka ụbọchị dị mma.
Oké osimiri South Straight abụghị nnukwu mkpọsa nke ụlọ ọrụ njem ị ga -achọpụta na St Nick Monica na Venice, mana nke ahụ nwere ike bụrụ ihe ị na -achọ.
Ebe ị ga -eri/drinkụọ ihe ọ Manụ :ụ: Manhattan Seashore Post bụ onye mmeri nri ụtụtụ dị arọ nke ukwuu, nwere achịcha anụ ezi cheddar zuru oke na steak skim churich chimichurri iji merie isi ọwụwa ọ bụla. Ọ bụrụ na ha ejula, ịkụ azụ nwere ike bụ ihe ọzọ, n'ihi ihe nwere ike ịbụ mmanya kacha mma n'obodo.
Point Dume dị na nsọtụ ndịda nke Malibu, n'elu ugwu nke na-asọba na Pacific wee na-agbada ruo ọmarịcha osimiri mara mma.
Mmiri ahụ doro anya nke ukwuu, na -eme ka ọ bụrụ ebe dị egwu igwu mmiri n'ụbọchị anwụ na -ekpo ọkụ, yana nnukwu ebe a na -egwu mmiri ebe ị nwere ike iji ọdụm mmiri.
Ọzọkwa, a makwaara osimiri ahụ maka ọmarịcha ebe iji mụta ịrị ugwu. Enwere obere ihe maka onye ọ bụla nọ n'ime ya.
Ndi matador bụ ụdị osimiri nke Angeleno ga -achụpụ gị ozugbo ị rutere n'ọdụ ụgbọ elu.
Ọ bụ ala dị ịtụnanya, elibere steepụ na -agbagharị agbagharị nke nwere nnukwu ọmarịcha okwute ndị yiri ka ha sitere na Pacific, yana ọdọ mmiri ọdọ mmiri nke na -enye nlele nke ndị enyi anyị.
Ọ bụrụ na ị kpebie ileta ha maka foto ma ọ bụ naanị ịgagharị, biko kpachara anya yi akpụkpọ ụkwụ mmiri n'ihi na okwute nwere ike na -amị amị. El Matador enweghị ọrụ ma ọ bụ akụrụngwa n'ihi na ọ bụ akụ sitere n'okike.
Ị ga -akwado maka ụbọchị ahụ ma ọ bụrụ na ị wetara akwa akwa osimiri gị, ihe mkpuchi anwụ na ihe oriri.
Ihe ị ga -eme na Orland, FL
Hụ, nhọrọ anyị maka oke osimiri dị mma na gburugburu Los Angeles, yana ndụmọdụ maka otu esi erite uru na onye ọ bụla.
Ụbọchị ncheta na -egosi mmalite mmalite oge ọkọchị na Southern California, na -egosi na oge oke osimiri na -aga n'ihu ugbu a.
Kedu ihe ọzọ, ebe a na LA, ebe ọ naghị esiri ike ịchọ ụbọchị na -enwu enwu n'ezie, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ mgbe oge ruru ịhazi ahụmịhe aja gị ọzọ.
Yabụ jiri oke osimiri anyị na -emesapụ aka ya na ọtụtụ oke osimiri dị mma maka ịkwọ ụgbọ mmiri, sọọfụ, igwu mmiri, ma ọ bụ sọsọ n'ụsọ osimiri. Anyị na-ekwe nkwa na ị ga-emecha gbanwee dabere na oke ikuku oyi nke Oke Osimiri Pasifik, ọkachasị n'ọnwa ọdịda tupu ọdịda ọkụ na-enweghị ike ị nweta.
N'elu ebe ntụpọ mmiri dị mkpa ka ị banye n'ime na gburugburu Los Angeles, yana ntụpọ ị kwesịrị iri mgbe ị nọ ebe ahụ. Olileanya na ị masịrị ha.
Biko hapụ okwu, dị ka akụkọ a n'akụkụ osimiri dị m nso, gwa ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị gbasara ya!
Tags:a na -emeghe osimiri ndị dị na los angeles, osimiri dị m nso, osimiri kacha mma na la, lagana beach, ogologo osimiri, osimiri Venice
Okwu nne nne & Ozi ụbọchị ọmụmụ: 65 Nhọrọ kacha mma maka nne nne
Ọnọdụ na Delaware: Nnukwu obodo na Delaware, United States of America
Ozi na ozi ekele ndị ọrụ: 65 Nhọrọ kacha mma